"Alliance Tsiro" - Natsangana ho fanatsarana ny fidiram-bolan’ny tantsaha eo amin’ny sehatry ny sôkôla sy ny laron-tsakafo
Nanomboka fiaraha-miombona antoka vaovao eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina ny USAID eo amin’ny sehatry ny sôkôla sy ny laron-tsakafo. Fomba fiasa vaovao eto an-toerana, antsoina hoe : Alliance Tsiro.
Fanamby amin’ny fampandrosoana ny sehatra asa
Nanomboka fiarahamiombona antoka vaovao ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID). Tanjona kendrena amin’izany ny hanamafisana ny sehatry ny sôkôla sy ny larontsakafo sy hanatsarana ny fiveloman’ny tantsaha. Miisa eo amin’ny 2000 mahery any amin’ny vondrom-piarahamonina 30 eo ny tantsaha ho tohanana amin’izany. Ary ho fanampin’izany dia hisy ny voly hazo maherin’ny 1,5 tapitrisa ao anatin’ny dimy taona ho fanohanana ny agroforesterie sy ny hamaroan’ny zavaboahary. Mitentina 5,8 tapitrisa dolara ary haharitra dimy taona ity fiaraha-miombiona antoka iarahan’ny USAID amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina ity.
« Mihevitra ny USAID fa ny sehatra tsy miankina dia hery matanjaka amin’ny fampivoarana ny toekarena, ny famoronana asa, ary ny fampivoarana ny fahafahana manatsara ny fiadanan-tsain’ny vahoaka sy ny fiarahamonina »,
hoy ny tale jeneralin’ny USAID Madagascar, John Dunlop.
Ny Alliance Tsiro dia misolo tena ny fikambanam-pampandrosoana maneran-tany Hearth mba hamantarana sy hiatrehana ireo fanamby amin’ny fampandrosoana, amin’ny alalan’ny fiaraha-miombona antoka mahasoa ny tsirairay.
Mampifandray ireo orinasa tsy miankina eto an-toerana sy any ivelany izy, miaraka ireo fikambanana tsy mikatsaka tombony miasa eo amin’ny sehatry ny sôkôla sy ny laron-tsakafo. Tafiditra ao anatin’izany ny Catholic Relief Services (CRS), ny Fine Chocolate Industry Association (FCIA) , Beyond Good, Guittard Chocolate, Akesson’s Organic, ary ny Heirloom Cacao Preservation Fund (HCP). Mpiara-miasa ara-teknika kosa ny Centre ValBio sy ny Zoo Bristol.
« Tanjona tokana no tiantsika hotratrarina, dia ny fanatsarana ny toe-karenan’ny mpamboly, ny fanamafisana ny fizotra manontolo manomboka amin’ny fambolena ka hatramin’ny fivarotana ny vokatra cacao sy ny laron-tsakafo an’i Madagasikara, ary ny fanohanana ny hamaroan’ny zavaboahary eo amin’ny tontolo iainana tsy manam-paharoa ilaina amin’ny famokarana ireo voly ireo »,
hoy i Jim Hazen avy amin’ny CRS amin’ny anaran’ny Alliance Tsiro.
Rafitra « agroforesterie »
Anisan’ny lahasa tanterahina ao anatin’ ity tetikasa ity ny rafitra « agroforesterie ». Fambolen-kazo maherin’ny 1,5 tapitrisa no hambolen’ny Alliance Tsiro any amin’ny tandavalan’ny Tsaratanana sy Fandriana Vondrozo. Izany dia natao mba hialofan’ny Criollo, karazana cacao tena mahasarika ny orinasa mpamokatra sôkôla eto Madagasikara Hambolena Cacao sy laron-tsakafo ihany koa ireo faritra ireo araka ny rafitra agroforesterie, ary manaraka ny drafitry ny Alliance hiaro ny hamaroan’ny zava-boahary sy ny sehatry ny sôkôla momba ny varotra.
« Miaro ny hamaroan’ny zavaboahary izy ireo amin’ny fanomezana toeram-ponenana ho an’ny gidro sy ireo karazana biby monina ao anaty ala, ary mahafeno ny fepetra ilaina ho any tantsaha hambolena cacao avo lenta, izay azony amidy amin’ireo mpividy iraisam-pirenena amin’ny vidiny ambony »,
hoy ny talen’ny biraon’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra ao amin’ny USAID, Agathe Sector.